Izimbozo zefriji → Izambatho zamagumbi abandayo • I-P & M yokuhombisa ikhompyuter
oovimba isikhenkcezisi yingubo enikezelwe ekusebenzeni phantsi kweemeko apho iqondo lobushushu lehla laya kutsho kuma -40 degrees C. Ezi ziimveliso ezikumgangatho ophezulu, ezithungelwe ngononophelo olukhulu, esele zizibonakalisile kwiinkampani ezininzi. Ukuxabisa ukusebenza kwazo, zikhethwe ngabathengi abavela kumazwe ahlukeneyo. Ihlala ithengwa ngokudibanisa ne izihlangu yaye iiglavu. Sikwacebisa iimpahla zangaphantsi ezisebenzayoeya kuthi ngokugqibeleleyo incedise ukhuseleko lomzimba kumaqondo obushushu asezantsi.
IColdstore CS-12 ivenkile ebandayo
Izikhuselo zefriji ezinobungcali ezinezatifikethi
Ku pm.com.pl, sinikezela ngefriji yobuchwephesha kunye nevenkile ezibandayo, ezibalaseleyo ngokusebenza kunye noyilo lwangoku. Imodeli ethandwa kakhulu yile IColdstore CS-12 Ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nentuthuzelo yomsebenzi kunye nokhuseleko oluphezulu.
Isuti enye yokuqubha inemigca ebonakalayo yokubonakala okungcono.
Le modeli ineeziphu kwimilenze nakwisiqingatha seiglavu kwii-mockups. Isinxibo sibanjiwe isiqinisekisoEnkosi apho inokusetyenziselwa indawo apho ubushushu bufikelela khona -40 degrees Celsius, ukhusela ngokuchasene nokunxibelelana kunye nokubandayo kokuhamba nokubanda. Imodeli yeColdstore CS-12 inelaphu lepolyester eliphefumlayo elinendawo ezinamabala kunye namanzi agxothayo. Ukusuka kuthotho lweCOLDSTROE, sikwabonelela ngejasi leCOLDSTORE CS10 kunye neblukhwe yeCOLDSTORE CS11.
Isikhuselo sokhuseleko kwizikhenkcezisi okanye iivenkile ezibandayo ze-HI-GLO 40 ukhuseleko ukuya kuthi ga kwi -83,3 ° C
Uluhlu lweengcali kwiinkampani zobungcali
Iimodeli esizibonisayo zinenkcazo eneenkcukacha. Ukongeza, kwimodeli ye-Hi-Glo 40, sinikeze isatifikethi esiqinisekisa ukuthotyelwa komgangatho we-UNE-EN 342: 2004 / AC: 2008. Imodeli ekhankanyiweyo ine-340 g yokugquma ubushushu, izinto zangaphandle ziyinylon, kwaye ngaphakathi yenziwe nge-polyester, ngelixa ikhola ine-280 g ye-polyester yoboya. Abathengi banokujonga ukuba iimveliso zenziwe ngantoni, ngawaphi amaqondo obushushu enzelwe wona kunye nokuba ubunzima bomkhiqizo bunantoni. Iisuti ziyilelwe ukuba zisetyenziswe iminyaka eliqela kwaye zingaphazamisi ntshukumo emsebenzini kangangoko kunokwenzeka.
Ukuba uyathandabuza, nceda unxibelelane nesebe lethu lenkonzo yabathengi, oya kukuvuyela ukukunceda ukhethe iimpahla ezifanelekileyo zefriji kunye nevenkile ebandayo. Sikwanikezela ngeebhatyi, iibhulukhwe, izihlangu, iiglavu.
igumbi elibandayo ligqumeifanele amaqondo obushushu asezantsiiiovaroli ebusikaukhuselo olufihlakeleyo ukuya kuthi ga kwi-40 degreesiyunifomu yokhuselekoisuti yomsebenziiiovaroli zefrijiIndawo ezigqume iColdstoreHi-Glo iisutiikhava efrijiniivenkile ebandayo ebekiweyoivenkile ebandayo ebekiweyoivenkile ebandayoingqokelela yevenkile ebandayoisuti yokukhusela